Nubia Z20: Nkọwa, ọnụahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị | Gam akporosis
Izu ole na ole gara aga ekpughere ya na August 8 Nubia Z20 ga-egosi n'ihu ọha. Ọ bụ ụdị ọhụụ nke ika ndị China, akpọrọ ka ọ bụrụ otu n'ime igwe ekwenti ya. Otu n'ime akụkụ ndị kwere nkwa ịbụ isi na ekwentị a bụ ọnụnọ nke a abụọ na ihuenyo n'ime ya, nke na-eri eri izu ole na ole gara aga ma taa anyị mechara nwee ike ịhụ.
Nubia Z20 na-ahapụ anyị na ihuenyo abụọ, nke doro anya na mmewere akpọrọ iji mepụta ọtụtụ mmasị. Ke adianade do, ọ na-agbakwụnye na-eto eto na ndepụta nke igwe na-eji Snapdragon 855 Plus dị ka ihe nhazi. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ịrụ ọrụ dị ukwuu n'aka gị.
Ihuenyo buru ibu na-adị n'ihu na ekwentị, na-enye gị ohere iji ya mee ihe n'ụzọ doro anya. Ọ bụ ezie na ihuenyo nke abụọ dị na azụ, n'okpuru igwefoto ahụ. Yabụ na ekwentị a enweghị obere ohere a na-ejighị ya, nkwa doro anya maka ndị ọrụ China.
1 Nkọwa Nubia Z20
Nkọwa Nubia Z20
Na teknụzụ ọkwa anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Nubia Z20 a bụ njedebe dị elu, nke ga-doro anya na-enye anyị ezigbo arụmọrụ. Ike, ya na ezigbo ese foto yana ihe ọhụụ, ọ na-ekwe nkwa ịbụ ekwentị nwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ya. Ya mere, ọ na-egosi nnukwu ọganihu nke akara ndị China nwere n'ahịa, nke hapụrụlarị anyị igwe na-atọ ụtọ nke ukwuu n'afọ a. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,42-inch AMOLED na mkpebi FullHD + (2.340 x 1.080 pixels) na 19,5: 9 ruru
Secondary Screen: 5,1-inch AMOLED with HD Resolution (1.520 x 720 pixels)
Processor: Qualcomm Snapdragon 855 Gụnyere
IHE RAM: 6/8 GB
Nchekwa dị n'ime: 128/512 GB
Ese foto: 48 + 16 + 8 MP na ikanam Flash
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo 9 achịcha na Nubia UI 7.0
Njikọta: WiFi ac 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.1, Dual GPS, USB Type-C, GPS, GLONASS, Dual SIM
Ndị ọzọ: Mmetụta mkpịsị aka ugboro abụọ
Akụkụ: 158,63 x 75,26 x 9 mm
Arọ: gram 186
Otu n'ime akụkụ kachasị ama na Nubia Z20 bụ ọnụnọ ihe mmetụta mkpịsị aka abụọ na ekwentị, otu n’akụkụ ọ bụla nke ekwentị a. Ebumnuche n’azụ nke a bụ na onye ọrụ ga-enwe ike ịmeghe ekwentị n’agbanyeghi otu ha si ejide ya. Ya mere, nkasi obi ụfọdụ nwere ike ịbụ na nke a. Igwefoto ekwentị ahụ, atọ na mkpokọta, dị na azụ. Enweghị igwefoto dị n'ihu na ngwaọrụ ahụ, yabụ anyị na-ejikwa ndị ahụ ese foto selfie.
Batrị ekwentị nwere ikike nke 4.000 mAh, nke na-abia na 27W ngwa ngwa. Ọ bụ ihe kwesịrị inye anyị ezigbo nnwere onwe, ọkachasị na Snapdragon 855 Plus na ekwentị dịka onye nhazi ya. N’ụzọ dị otú a, a na-atụ anya ịrụ ọrụ dị mma, nke ga-doro anya na ọ ga-ekwe ka ọ bụrụ ntụaka dị elu.
Maka ugbu a, a ga-amalite Nubia Z20 naanị na China., dị ka ha kwuru site na ụlọ ọrụ. Mbido ya na mba a ga-eme na August 16, mana enweghị ozi banyere mwepụta nke ihe nlereanya a na Europe, yabụ anyị ga-echere maka akụkọ na nke a. O nwere ike were ọnwa ole na ole ịmalite.
Ekwentị na-abịa na nsụgharị atọ na agba atọ, dịka ekwenyelarị. Ndị ọrụ ga-enwe ike ịzụta ya na agba anụnụ anụnụ, oji na ọbara ọbara. E nwekwara ụdị atọ dị na RAM na nchekwa, dịka enwere ike ịhụ na nkọwa ekwentị. Ndị a bụ ahịa na China maka ụdị ọ bụla:
A na-eme ihe nlere na 6/128 GB na ọnụahịa nke yuan 3.499, ihe dị ka euro 443 iji gbanwee
Versiondị nke nwere 8/128 GB ga-enwe ọnụahịa nke yuan 3.699 (ihe dị ka euro 468 na mgbanwe ahụ)
Ihe nlere anya na 8/512 GB dị ọnụ na 4.199 yuan, ihe dị ka euro 531 na mgbanwe ahụ
Anyị ga-anọ na nche maka akụkọ banyere mwepụta nke Nubia Z20 na Europe, nke enwere ike ịkpọsa n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nubia Z20: Ekwentị ọhụụ ọhụụ ọhụụ